Sihlalutya i-Uhans A101S, ingxelo ephuculweyo yeklasikhi "yexabiso eliphantsi" | Iindaba zeGajethi
Sihlalutya i-Uhans A101S, inguqulelo ephuculweyo yeklasikhi "yexabiso eliphantsi"
Sibuya novavanyo lwethu, kwaye namhlanje sifuna ukukuzisela isixhobo esinexabiso eliphantsi, esiya konwaba abo bangenanjongo yokuchitha imali eninzi ukwanelisa iimfuno zabo. I-Uhans A101S luguqulelo oluphuculweyo lwesixhobo ebesikhe sasihlalutya ngaphambili kwiActualidad Gadget, kunye nokuphuculwa okuthile kwinqanaba lehardware eliza kuyenza ibe nomtsalane ngakumbi, i-RAM kunye ne-GPU ibe ngabaphumeleleyo ababini abakhulu. Hlala nathi ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nesi sixhobo sophawu lweUhans esikhulisa uphononongo olulungileyo. Sikwakhapha uhlalutyo lwethu kunye nevidiyo ukuze ubone i-Uhans A101S kubuqaqawuli bayo obuphezulu.
1 Uyilo lwe-Uhans A101S
2 Ukusebenza kwesi sixhobo
3 Isikrini kunye nekhamera
4 Yintoni eyenza le Uhans ikhetheke?
5 Umxholo webhokisi kunye noluvo lomhleli
Uyilo lwe-Uhans A101S
Uyilo mhlawumbi yenye yezinto esele ithathele ingqalelo kuhlelo lwangaphambili, ngaphandle kokuba sisixhobo esenziwe ngokupheleleyo polycarbonate, Ukuqina kwezinto zisimangalisile kuhlalutyo lwangaphambili. Ngeli thuba, abafana baseUhans abakhange basilele, baqhubekile nokusebenzisa ifomula efanayo, besebenzisa uluhlu lwemibala eya kuba yeyothusayo, kwaye inguRhulumente weGrey kunye neSilivere abayinikezeleyo kuhlobo lwakudala , ii-Uhans A101S zamkela imibala emibini emitsha, inguqulelo yeChampagne Gold kunye nohlobo lweQuartz Pink, engayi kushiya nabani na ongakhathaliyo. Ngapha koko, uguqulelo olupinki lolu siye sakwazi ukuluvavanya, kwaye siqwalasele indlela i-bezels zayo ezixelisa ngokugqibeleleyo ialuminium.
Umva usenziwa nge-polymmer ebamba isandla kakuhle, kwelinye icala, isombulula ubukhulu bayo obuninzi ngokugqobhoza ngasemva okusikhumbuza nge-Samsung kwaye iyilungelelanise kakuhle kumda wezandla zethu. Ngaphambili uya kuba nefayile ye- Iglasi ye-2.5D, phantsi kwegama leglasi yeGorilla, eqinisekisa ukumelana neempembelelo eziyinike udumo olufanelekileyo kuhlelo lwayo lwangaphambili.
Ukusebenza kwesi sixhobo
Njengoko besesitshilo ngaphambili, le nguqulelo ephuculweyo ye-Uhans A101 yangaphambili, ke ubuncinci, sacela ukonyuka kwe-RAM, mhlawumbi eyayilahlekile. Kwaye sele kunjalo, le Uhans A101S entsha ine-2GB ye-RAM, Kunye neprosesa MediaTek MT6580 phakathi kuluhlu, ke ibaleka i-Android 6.0 ngokutyibilikayo, kuyinyani ukuba mhlawumbi kuya kubakho ubunzima ekuqhubeni imidlalo yakutshanje, kodwa akufuneki silibale ukuba sijongane nesiphelo ngexabiso eliphakathi. Kwicandelo lemizobo sine Mali400 GPU isivuno esiphakathi.
I-ROM ikwandisiwe, ukuya kuthi ga kwi-16GB, enye inkalo iyimfuneko, kuba i-8GB yeklasi ye-Uhans A101 isenokungaphumeleli. Ngokufanayo, sinokuyandisa ukuya kuthi ga kwi-64GB ngekhadi le-MicroSD.
Isikrini kunye nekhamera
Kodwa ayisiyiyo yonke into ehleli apha, kwaye ikhamera iba yintsimbi ye-8MP yakwaSony, ekwaziyo ukufaka ukukhanya okungcono nangakumbi, inzwa I-Sony IMX219 CMOS, enegalelo lokwenyani le-8MP kunye ne-13MP efakwe kwikhompyutha. Kwikhamera engaphambili sinesivamvo se2MP sanamhlanje.
Nangona kunjalo, sisiya kwindawo yokuqala ebuthathaka yale Uhans A101S, kwaye yiyo loo nto inebhetri ye 2.540 mAh, ukuba nangona zimbalwa, ukutyhala eso sikrini I-intshi ezi-5, i-IPS kunye nesisombululo se-HD, ngekhe ibe yinto embi ubuncinci i-300 mAh ngaphezulu. Inqaku lokudibanisa kukuba ibhetri isuswayo. Kwicandelo lonxibelelwano, iklasikhi, uqhagamshelo lwe-WiFi, amandla emigca ye-3G kunye neBluetooth 4.1.
Yintoni eyenza le Uhans ikhetheke?
Ukuba iyindlela esecaleni kwendlela, asiyi kufumana kuyo naluphi na uhlobo lokuqhayisa, isivamvo somnwe okanye olunye uhlobo lweenkcukacha. Ifowuni inokuxhathisa okungafaniyo, ngendlela efanayo enokuthengwa ngexabiso eliphantsi, elinokuthi lenze libe nomdla ngakumbi. Ukuba into oyifunayo sisixhobo esinexabiso eliphantsi, kunye nenkcazo ye Uluhlu oluphakathi lokuba kwiinkampani ezinje ngeSamsung aluyi kuwa ngaphantsi kwe- € 180qhubeka phambili oku I-Uhans A101S ungayifumana nge- € 85 kwiAmazon okanye kwiwebhusayithi yenkampani ngale LINK.
Umxholo webhokisi kunye noluvo lomhleli
Ukupakishwa kuyafana kakhulu kuso nasiphi na isixhobo esinemvelaphi yaseTshayina ngezi mpawu kunye neli xabiso. Kwelinye icala, kubandakanya iinkcukacha ezinokuthi zibe luncedo.
Isixhobo se-Uhans A101
Isikhuseli seglasi enomsindo
Ngale nto sithetha ukuba nangona ingabandakanyi ii-headphone okanye ibhetri esecaleni, esi sixhobo siza nesigqubuthelo kunye neglasi enomsindo, ke ngekhe koyike ukuthenga nokusebenzisa. Ozithobileyo, isixhobo inikeza izibonelelo zokuba ne-Android 6.0 kwinguqu yayo emsulwa, ngaphandle kokongezwa, okunengenelo ngokufanelekileyo ekusebenzeni esiza kukufumana kwiselfowuni eneprosesa yokungena kunye ne-2GB ye-RAM.
Kwelinye icala, i-Uhans ngoku iqhuba iphulo le- ukuthengisa isixhobo sakho esitsha, bahlale benolwazi ngeendaba kwiphepha labo.
Ungasifumana esi sixhobo kwiwebhusayithi yabo esemthethweni ngexabiso elincitshiswe kakhulu, ukongeza, rhoqo ngolwesiHlanu benza i-raffle yesixhobo kwiphepha labo le-Facebook ngale nto LINK.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya i-Uhans A101S, inguqulelo ephuculweyo yeklasikhi "yexabiso eliphantsi"
yintoni smart smart
Phendula kwi clython
Le Uhans yenye yezona zinto zibalaseleyo kuluhlu lwayo ngexabiso elinalo, ndiyacebisa ukuba ufuna enye kwaye ugcine imali. Isebenza kakuhle kwaye inempawu ezintle zokungabizi kakhulu.
Iihans ziza ngamandla, ndibona uninzi lweembono ezilungileyo phaya haha. Inyani yile yokuba bayandiqinisekisa ukuba ndibambe enye ngokutshintsha eyangaphambili, ke awusebenzisi mali ingako kodwa ufumana iselfowuni elungileyo ngexabiso lemali, ndithi haha
Kulungile kwaye kungabizi kakhulu ndingathi. Ii-a101s zezona zilungileyo zinokuthi iihans zisizisele nos
Ewe zezona zilungileyo, ukhe wayibona ibhetri abanayo? zihlala ixesha elide. Banoluphononongo oluhle kakhulu, ndijonge kulo ukuze ndilubambe ngamandla 😉
Olukhetho olufanelekileyo ukuba uza kuthatha indawo yeselfowuni endala, ndincoma ukujonga, zitshiphu ukubanika ithuba
Eyona nto intle ukuba ufuna into enesidima engathathi onke amagumbi, kucetyiswa abo bafuna into ngexabiso eliphantsi ngezibonelelo ezilungileyo.
Zisabonakala njengenketho elungileyo kum, ndicinga ukuba kungakulunga ukuthatha ithuba lokuthengisa emva kweKrisimesi ngoku kwaye ubone ukuba zitshiphu haha
IMicrosoft ityhila ukuba ukuhlaziya Windows 10 kukwenza ube sesichengeni